မန်စီးတီး နဲ့ ချဲလ်ဆီး တွေ့ချိန်မှာ လီဗာပူး အခွင့်ရေးယူနိုင်မလား . . . EPL Week ၂၂ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ - xyznews.co
မန်စီးတီး နဲ့ ချဲလ်ဆီး တွေ့ချိန်မှာ လီဗာပူး အခွင့်ရေးယူနိုင်မလား . . . EPL Week ၂၂ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
ဒီတပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာတော့ ပွဲကြီး ပွဲကောင်းတွေ ပါဝင်လို့ နေပါတယ် ။
စနေနေ့ မှာ အဆင့် ၁ နေရာက မန်စီးတီး နဲ့ အဆင့် ၂ နေရာက ချဲလ်ဆီး တို့ ကစားကြမှာပါ ။ တနင်္ဂနွေ မှာတော့ စပါး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ရဲ့ လန်ဒန် ဒါဘီ ရှိနေ ပါတယ် ။
ဒါတင် မကသေးပါဘူး . . . အက်စတွန်ဗီလာ နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပွဲကလည်း ကော်တင်ဟို ရဲ့ တကျော့ပြန် ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့် နဲ့ အတူ စိတ်ဝင်စားဖု့ိ ကောင်းနေမှာပါ ။
ဒါကြောင့် ဒီတပတ် ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေ ထဲကမှ စနေနေ့မှာ ကစားမယ့် ပွဲတွေ အတွက် Sky Sports က လူးဝစ် ဂျုံးစ် ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရပါတယ် ။
ဒီပွဲဟာ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ချန်ပီယံ မျှော်လင့်ချက် အတွက် နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး လို့တောင် ဆိုရမှာပါ ။ သူတို့ ၂ သင်းကြားက အမှတ်ကွာဟမှု က ၁၀ မှတ်ထိ ရှိပါတယ် ။ ဒီပွဲ ကို စီးတီး နိုင်သွားခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ၁၃ မှတ် ဆိုတာကြီးက ဘယ်လိုမှ လိုက်လို့ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် ဒီပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ရုန်းအား ကို မြင်ရနိုင်ပါတယ် ။
နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံမှု ၅ ကြိမ်မှာ ချဲလ်ဆီးက အသာရ ထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခု စီးတီး က အရင်နှစ်တုန်းက စီးတီး ထက် အများကြီး ပိုကောင်းနေပြီး ချဲလ်ဆီး ရဲ့ လက်ရှိ အနေအထား ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လ လောက်ကထက် နည်းနည်း နိမ့်နေတယ်လို့ ပြောရမှာပါ ။
မန်စီးတီး ကတော့ ကျိန်းသေ တိုက်စစ်ဆင် ကစားမှာပါ ။ ဒါကို တူချယ် ဘယ်လို ပြင်ဆင် လာမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ ။
သူတို့ ၂ သင်း တွေ့တဲ့ ပွဲတွေမှာ ဂိုးများလေ့ မရှိပါဘူး ။ ဒီ တပွဲလည်း ဂိုးပြိုင် သွင်းဖို့ထက် ချဲလ်ဆီး ခံစစ် ကို စီးတီး က ထိုးဖောက်ရင်း ချဲလ်ဆီး ရဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ်တွေကို ခုခံ ကစားသွားမှာပါ ။
မန်စီးတီး နိုင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းပါတယ် ၊ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ သရေ ပါပဲ ၊ ချဲလ်ဆီး က အစ်တီဟတ် မှာ နိုင်ဖို့ လောက် အထိတော့ မတွေးရဲသေးပါဘူး ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး ၁ – ၁ ချဲလ်ဆီး
ဘွတ်ကီတွေရဲ့ အလေးပေးမှု ကို မှားမှာစိုးလို့ ၃ ခေါက်လောက် ပြန်ကြည့်လိုက်ရ ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် က ဒီပွဲကို နိုင်ဖို့ များတယ်လို့ အလေးပေး ထားကြတာပါ ။
ဘွတ်ကီတွေ ကတော့ သူတို့ ရဲ့ နည်းနဲ့ သူတို့ သတ်မှတ် ကြမှာပါ ။ မြေပြင် က အခြေအနေ ကတော့ အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ။
FA Cup တုန်းက အိုးထရက်ဖိုဒ့်မှာ ကစားသွားတဲ့ ဗီလာ ရဲ့ ကစားပုံက ဒီတပွဲ ကို ဘယ်လိုမှ မရှုံး နိုင်ဘူး ဆိုတာ ပြောပြ နေသလိုပါပဲ ။ အခု သူတို့မှာ ကွင်းလယ် တိုက်စစ်သမား တယောက် နဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ တယောက် ထပ်ရောက် လာပါပြီ ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာတော့ အကွဲအပြဲတွေ က ထင်တာထက် ပိုများ နေတယ် ဆိုတာ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ အင်တာဗျူး ကို ကြည့်လိုက်သူတွေ ရိပ်စား မိကြမှာပါ ။
ရန်းနစ် လက်အောက်မှာ ယူနိုက်တက် တို့ ဂိုးများများ မသွင်း နိုင်ပါဘူး ၊ ဒါကလည်း အရိုးစွဲ နေတဲ့ ကစားကွက် ကို ပြောင်းလဲ လိုက်တာ နဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင် ပါတယ် ။
ဆိုးရှား သာ ဆိုရင် ဒီပွဲ မှာ ခံစစ် အထိုင်ချပြီး တန်ပြန် တိုက်စစ် နဲ့ပဲ ကစားသွားမှာပါ ။ ရန်းနစ် ကတော့ ဒီလိုမျိုး လုပ်မယ့်ပုံ မပေါ် ပါဘူး ။
ရိုနယ်ဒို ပြန်ပါလာပါမယ် ။ ဒါကပဲ သူတို့ ကို အစီအစဉ် တကျ မဖြစ်စေမှာပါ ။ ဗီလာ ရှုံးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ။
ခန့်မှန်းချက် – အက်စတွန် ဗီလာ ၂ – ၁ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
၃ ။ ဘရိုက်တန် ၂ – ၁ ပဲလေ့စ်
၄ ။ ဘန်လေ ၁ – ၂ လက်စတာ စီးတီး
၅ ။ နယူးကာဆယ် ၂ – ၁ ဝက်ဖိုဒ့်
၆ ။ နောဝှစ်ချ် ၁ – ၁ အဲဗာတန်
၇ ။ ဝုဗ် ၁ – ၀ ဆောက်သမ်တန်
Previous Article မနေ့ညက ရှုံးထွက်ဖလားရလဒ်များ ၊ ကောလဟာလ ရောပြွမ်းနေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသံတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ဘရာဇီး ကွင်းလယ်လူနဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိ သွားပြီဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်း